Korintofo I 13 NA-TWI - Ɔdɔ - Sɛ mede nnipa ne abɔfo - Bible Gateway
Korintofo I 12Korintofo I 14
Korintofo I 13 Nkwa Asem (NA-TWI)
13 Sɛ mede nnipa ne abɔfo tɛkrɛma kasa na minni dɔ a, na mete sɛ ayowa a ɛregyigye anaa akasae a ɛrewosow. 2 Ebia na mewɔ akyɛde a mitumi ka Asɛmpa no ma ɛka nnipa koma; ebia na mewɔ osuahu ne ntease ma mete ahintasɛm nyinaa; ebia na mewɔ gyidi a ɛma mitumi tutu mmepɔw nanso sɛ minni ɔdɔ a, menka hwee. 3 Metumi de nea mewɔ nyinaa makyɛ na mpo matu me nipadua asi hɔ sɛ wɔnhyew nanso sɛ minni ɔdɔ a, ɛnyɛ me papa biara.